15 Best Final Cut Pro Windows Alternatives (2020) - Softwares
Raha ny fanovana horonan-tsary no resahina, toy ny fanovana tena izy amin'ny famoronana horonantsary mahavariana. Lahatsary manana fahefana hanova ny fomba fisainana sy izay heverin'ny maso ho tena tsara tarehy. Ny haitao farany ankehitriny dia tsy mamela ny hisambotra fotoana mahafinaritra fotsiny fa hahatonga azy ireo koa hampiala voly sy hirotsaka. Final Cut Pro dia iray amin'ny acme fandrosoana ara-teknolojia ankehitriny.
Final Cut Pro - Fampahalalana fohy
Ity rindrambaiko fanovana sary ity dia manana ny zava-drehetra mpamoaka lahatsoratra matihanina ary mihoatra ny angatahan'ny mpampiasa isan'andro. Izy io dia be mpampiasa ary malaza noho ny fiasa fampiasana haingana sy mora. Ireo endri-javatra ireo dia afaka manampy amin'ny famoronana horonantsary tonga lafatra amin'ny antsipiriany tsara indrindra sy fotoanan'ny olona. Miaraka amin'ny Video, azonao atao koa ny manatsara ny fandefasana feo amin'ny fomba mahomby amin'ny fandaniam-bola sy fandaniam-potoana. Ny fampiasana an'io toerana io ho an'ny fanovana horonantsary feno streamers maro dia nahatratra mpanaraka an-tapitrisany.
Mila safidy hafa:
Na dia tonga lafatra amin'ny fandefasana valiny aza, ny fampiasana Final Cut Pro dia manana ny fatiantoka ratsy. Voalohany indrindra, dia fitaovana voafetra isa voafetra. Final Cut Pro dia tsy misy afa-tsy amin'ny Mac OS izay azo hamarinina raha ilaina ny fepetra takiana amin'ny fanovana mahery vaika. Na izany aza, betsaka kokoa ny mpampiasa windows mihoatra ny Mac ary tsy ny rehetra no afaka mividy fitaovana Mac.
Ny fahaiza-mividy ihany koa dia singa iray manohana ny filana ny safidy Final Cut Pro. Voaloa ny rindrambaiko ary tsy maintsy mandoa $ 377.88 ianao ary tsy ao anatin'ny tetibola ho an'ny ankamaroan'ny mpanakanto fanovana ity. Na dia heverina ho fampiasam-bola indray mandeha aza dia toa ara-drariny, satria havaozina maimaimpoana. Saingy tsy tokony hiresaka amin'ireo mpampiasa vaovao sy mpamorona horonantsary miakatra ity vidin'ny vidiny ity. Tena lafo tokoa ny vidiny ka afaka mividy DSLR amin'ity vola be ity ianao!
Te hampiasa iMovie amin'ny Windows? Taratasim-bola Alternatives iMovie tsara indrindra ho an'ny Windows 10 avy amin'ny faritra bilaoginay.
Final Cut Pro Windows Alternatives - Tombontsoa sy tombony
Manomboka amin'ny filàna lehibe indrindra tokony hotanterahin'ny Final Cut Pro, dia azo alaina amin'ny varavarankely ireo. Raha omena mpampiasa windows betsaka dia azo antoka fa mendrika izany. Ny rindrambaiko solosaina dia mora kokoa noho ny Final Cut Pro izay tsy misy fahasamihafana firy amin'ny endriny. Ny rindrambaiko koa tsy dia mitaky fitaovana mavesatra ary manana perik manokana ho an'ny windows. Tahaka ireo dia mora kokoa amin'ny mpampiasa noho ny an'ny Mac.
Raha vaovao ianao amin'ny fanovana horonantsary ary mitady rindrambaiko hanombohana amin'ny fikandrana, na Professional ianao. Ity rindrambaiko 15 ity dia manana ny zavatra rehetra mety ilainao eo am-pitomboana ny fahaizanao mamorona. Ny zava-drehetra tsara kokoa sy mifandanja raha oharina amin'ny Final Cut Pro. Raha tsy misy ny fampiroboroboana ny famoronana famoronana, andramo ireto farany Cut Pro Pro.
Tsy misy safidy Final Cut Pro tsara kokoa noho ity rindrambaiko fanovana horonantsary nataon'i Adobe ity. Ny toeram-ponenana dia tsy manan-tsahala amin'ny sehatry ny fanovana sary hatramin'ny nanombohany. Ny rindrambaiko fanovana horonantsary Adobe Premiere Pro dia nohavaozina avy amin'ny Adobe Premiere natomboka tamin'ny taona 1991. Namboarina ho an'ny fampiasana Professional fotsiny izy io, raha ny kinova hafa amin'ity rindranasa 'Adobe Premiere Elements' ity dia natao hampiasaina manokana.
Ny rindrambaiko dia ampiasain'ny CNN sy BBC. Sarimihetsika malaza toy ny Deadpool, Gone Girl, ary terminator dark no noforonina tamin'ny alàlan'ny Adobe Premiere Pro. Azonao atao ny manitsy horonan-tsary avo lenta hatramin'ny 10,240 x 8,192 amin'ny RGB sy YUV. Izy io dia mamela ny fanovana 3D, fanovana am-peo ary fanohanana plug-in audio VSR. Ny fanitsiana haavo haavo Broadcast rehetra ary ny fanovana horonantsary ilaina dia azo atao ao amin'ity rindrambaiko ity.
Ny safidy Final Cut Pro malaza, ao amin'ny Adobe Premiere Pro, dia afaka manafatra horonantsary, feo ary sary. Azonao atao ny manondrana horonantsary nefa tsy manimba ny vahaolana amin'ny fizarana vonona amin'ny fizarana. Manampia vokany amin'ny horonan-tsary, ampiasao ny clip sy ny sary, afangaroy miaraka izy ireo ary ny lohateny mandritra ny fanitsiana ireo rindranasa ao amin'ilay rindrambaiko. Izy io dia manohana endrika endrika horonantsary marobe sy fampiharana tafiditra.
Famahana horonantsary kalitao premium
Betsaka amin'ireo endrika fisie anohana
Tsy misy kinova maimaim-poana, tsy misy afa-tsy fitsarana maimaim-poana
Fepetra takiana fanampiny
Premiere Pro Single App amin'ny $ 1,675.60 / volana
Orinasa ao amin'ny₹ 2,300.00 / volana
Raha fantatrao ny momba ny famolavolana sary malaza fampiharana dia mila manana mafy momba Corel ianao. Raha misy mpifaninana amin'ny fanovana sary Adobe, azo antoka fa Corel izany. Namboarina tamin'ny taona 1985 ity orinasa ity dia nandefa CorelDraw rindrambaiko famolavolana sary izay nanjary be mpitia fa mbola tsy manam-paharoa. Nanafika ny sehatry ny sary Corel nandefa Corel VideoStudio hanjakazaka amin'ny fanovana horonantsary koa!
Raha ny kalitaon'ny horonantsary sy ny fanodinana horonantsary dia azo atokisana tanteraka ity safidy Final Cut Pro ity. Raha ampitahaina amin'ny Final Cut Pro, ity rindrambaiko ity dia manana ny zava-drehetra mifaninana aminy ary fanampiny amin'ny fampisehoana ho mpamoaka horonantsary. Azonao atao ny mampiasa effets premium sy fanovana horonantsary avo lenta avy amin'ny 720p ka hatramin'ny 2610p miaraka amin'ny fitaovana fanovana tokana.
Izy io dia manana sivana mihoatra ny 2.000+, ampy ho an'ny mpampiasa amin'ny horonan-tsarinao 10,000+ manaraka. Izy io koa dia manana sivana azo ovaina, fanoratana loko, ary tetezamita. Izy io koa dia manana recorder efijery izay azonao ampiasaina miaraka amin'ny endri-tsarimihetsika webcam. Izy io koa dia manana NewBlueFX, Boris FX, ary ProDAD. Mampiasà Corel VideoStudio Ultimate hananganana horonan-tsary mamorona sy voahitsy.
2000+ Sivana & fitaovana fanovana marobe
Fanovana horonan-tsary avo lenta
Matoky sy ampiasain'ny matihanina
Tsy misy kinova maimaim-poana
Full Version indray mandeha amin'ny₹5.890
Fanavaozana ny kinova taloha kokoa amin'ny₹4,714
Azo zahana mandritra ny 30 andro ny kinova fitsapana maimaimpoana
3. Avid Media Compositeur
Ity rindrambaiko ity dia malaza sy be mpampiasa amin'ny indostrian'ny sarimihetsika. Navoaka tamin'ny 1989 ho an'ny Macintosh izy, miaraka amin'ny fivoarana bebe kokoa ary navoaka ho an'ny windows ny kinova vaovao. Raha ampitahaina amin'ny Final Cut Pro, ity rindrambaiko ity dia manome kalitao sy fiasa mitovy amin'ny Windows. Ny rindrambaiko dia manana famolavolana intuitive sy interface-easy an'ny mpampiasa. Ny rindrambaiko dia manana kinova 4 ary azo ampiasaina ho rindrambaiko mijoro irery.
Ity safidy Final Cut Pro ity dia mahomby amin'ny fotoana misy azy miaraka amin'ireo endri-javatra tsy manam-paharoa sy ny interface tsara naorina, tonga lafatra rehefa mandeha ny fotoana. Ny rindrambaiko dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana manokana na koa matihanina. Feno fitaovana maromaro izy io, fanitsiana loko tsara kokoa ary VFX. Azonao atao ihany koa ny manitsy feo mba hifanaraka amin'ny kalitaon'ny horonantsary ary tsy avelan'ny feo hametra ny fahaizanao mamorona.
Ireo kinova efatra misy dia ny Media Composer First, Media Composer, Media Composer Ultimate, ary Media Composer Enterprise. Ny kinova tsirairay dia manana endrika samihafa, ary tsara kokoa noho ilay teo aloha. Ny kinova voalohany Media mpamoron-kira Voalohany no tsara indrindra ho an'ny mpanakanto vaovao amin'ny fanovana horonantsary satria maimaim-poana izany ary manome filàna fanovana horonantsary fototra. Ny manaraka dia misy karama ary misy mandritra ny 30 andro fitsarana maimaimpoana.
Misy kinova maimaim-poana
Kinova voaloa miaraka amina andrana maimaimpoana
Volavola tsotra sy fizarana, fanafarana ary fanondranana mora
Vidiny lafo ho an'ny kinova aloa
Mpanoratra haino aman-jery amin'ny 499.99 $ / taona
Farany amin'ny $ 49,99 / Volana
Enterprise amin'ny vidiny miovaova
Ity no safidy Final Cut Pro tsara indrindra ho an'ny windows ary misy ao amin'ny magazay Microsoft. Afaka mamorona horonan-tsary amin'ny fampiasana sary, clip, ary mozika amin'ity rindrambaiko ity ianao. Ity rindrambaiko fanovana horonantsary ity dia malaza be eo amin'ireo mpampiasa varavarankely noho ny fisian'ny mpampiasa-interface-ny windows.
Ny fiasa toy ny fampidirana horonan-tsary, mozika any ambadika ary ny lohateny an-tsoratra dia azo atao mba hanamafisana ny horonan-tsarinao amin'ity rindrambaiko ity. Ny endri-javatra toy ny sivana sary, ny fifanakalozana ary ny effet zoom dia azo ampiana ihany koa. Haingam-pandeha ny fanodinana ary mitazona fanovana horonantsary marin-toerana sy avo lenta. Azonao atao ny manampy mozika avy amin'ny làlan-kaleha na manafatra ny rakitrao manokana.
Ampiasaina manokana ho an'ny tanjona manokana, misy kinova roa izy io. Ny Moviemaker 10 dia kinova maimaimpoana ary manome ny fiasa fanovana horonan-tsary ilaina rehetra. Raha Moviemaker Pro dia azo antoka fa safidy Final Cut Pro amin'ny fampiasana Professional. Ny Pro dia voaloa ary mamela ny fidirana amin'ny endri-javatra fanampiny sy ny fanovana horonantsary kalitao tsara kokoa. Ho an'ny mpanakanto mpanova horonantsary mianatra, ity app ity dia mety ho teboka fanombohana tonga lafatra.
Fampivoarana maimaimpoana ho an'ny windows
Fitaovana fototra ao amin'ny kinova maimaim-poana
Milamina, haingana ary mahomby
Endri-javatra voafetra amin'ny kinova maimaim-poana
Tsy tokony hampiasaina amin'ny fampiasana matihanina
8,99 $ vidin'ny indray mandeha
Ity safidy Final Cut Pro ity dia manome mihoatra ny Final Cut Pro. Ny rindrambaiko dia mamela ny fandikana, ny fanaovana maodely, ny fanaovana sary sokitra, ny sarimiaina ary ny fanodinkodinana video miaraka amin'ny fanovana. Ny endri-javatra fanovana ny horonan-tsary dia mamela fanovana fototra toy ny fanapahana horonan-tsary sy ny splicing. Ny rindrambaiko koa dia mamela ny fampifangaroana feo mba hamenoana ny fanovana horonantsary avo lenta.
Amin'ny fifehezana feo, mamela ny fakana sary an-tsaina, fampifangaroana ary ny fizahana onja. Ankoatry ny fanovana horonantsary ifotony dia manohana endrika fanovana horonantsary sarotra toy ny masking Video sy ny fandokoana loko izany. Ny rindrambaiko dia ampiasain'ny mpamolavola lalao, mpanakanto sarimiaina, mpamorona sary. Azonao atao ny mifehy ny hafainganana, manampy ny tetezamita, ny sivana ary ny keyframes.
Ny mpamoaka horonantsary dia feno fitaovana sy fiasa toa ny Live preview, luma formforma, chroma vectororscope, ary histogram. Afaka miasa miaraka amina horonan-tsary 32 samihafa ianao miaraka amin'ny slot 32. Tsy ny horonan-tsary ihany fa ny sary, feo, sarontava ary vokany. Ity safidy Final Cut Pro ity dia Trouville satria maimaim-poana ampiasaina sy Manome mihoatra noho ny mpanonta horonantsary maimaim-poana ampiasaina matetika.
Tsy andoavam-bola, fampiasana mandritra ny androm-piainana
Tsy natao indrindra hanovana horonantsary
Ity safidy Final Cut Pro ity dia misy amin'ny windows. Ity mpamoaka horonantsary ity, amin'ny lafiny rehetra, dia mpifaninana matanjaka ho an'ny Final cut ho an'ny ary na dia eo amin'ireo mpisolo toerana Final Cut Pro aza. Ny tonian-dahatsoratra dia mamela ny fanovana horonantsary fototra sy ny hafainganam-pandeha tena mendri-piderana. Ahitana effets sy transitions mihoatra ny 50 hiantohana ny fanovana famoronana.
Mba hanomezana fifaninanana matanjaka ny rindrambaiko premium dia mamela ny Fanovana sy fanondranana rakitra 3D sy rakitra video 360 izany. Manohana endrika fisie maro be ary manana fitaovana audio an-tserasera handefasana horonantsary am-peo avo lenta. Ny mpampiasa interface dia mora ary mamela ny fanovana sy ny fanafarana horonan-tsary amin'ny alàlan'ny drag sy drop.
Ny rindrambaiko fanovana horonan-tsary dia mamela ny fizarana sy ny fandoroana amin'ny endri-javatra DVD hanamorana ny fizarana. Azonao atao ny mandamina tsara ny loko, mifehy ny hafainganana ary mampiorina ny horonantsary. Azonao atao ihany koa ny mamorona horonan-tsary misy looped sy mandefa horonantsary amin'ny vahaolana avo lenta manomboka amin'ny 4k ka hatramin'ny 720p sy maro hafa. Ny kinova maimaim-poana dia misy amin'ny fampiasana tsy Professional, fampiasana mpanjifa. Ho an'ny fampiasana Professional, azonao atao ny mividy ilay kinova aloa.
Fanovana horonantsary mora sy tsotra
Fampivoarana maimaim-poana ho an'ny fampiasana anao manokana
39,95 $, fandoavam-bola indray mandeha
Ity safidy Final Cut Pro ity dia miavaka amin'ny iray hafa satria tsy rindrambaiko io fa fitaovana fanovana horonantsary an-tserasera. Ho solon'ny fitaovana fanovana horonantsary premium dia mety taraiky kely izy io ho an'ny Professionals. Saingy amin'ny fampiasana isan'andro isan'andro, dia mety indrindra izany.
Ny fanovana horonantsary fototra toy ny merge, compress, resize, slideshow sns dia azo atao an-tserasera amin'ity tranokala ity. Rehefa mitsidika ilay tranonkala ianao dia mahita fitaovana fototra aseho eo amin'ny pejy voalohany. Amin'ny fikarohana bebe kokoa, dia afaka mahita fiasa fanampiny fanampiny izay afaka manome horonantsary vonona Youtube mendrika.
Na dia tsy misy fampiharana na rindrambaiko mpanjifa omen'ity tranonkala ity aza. Mbola azonao atao ny mametraka ny fampiharana ao amin'ny windows 10. Raha te-hametraka, sokafy ny video amin'ny sisin'ny Microsoft. Tonga amin'ny ellipsis mitsangana ary mandeha amin'ny fampiharana. Ao amin'ny fampiharana dia kitiho ny 'apetraho ity tranonkala ity ho fampiharana' ary kitiho ny fametrahana ao anaty boaty fifanakalozan-kevitra izay fampiharana. Ho sintonina izy io ary azo tanterahina hatramin'ny voalohany. Ny fanaovana izany dia hanamora ny fidirana amin'ireo endri-javatra sy fitaovana.
Azo ampiasaina amin'ny telefaona koa
Misy ny fanovana horonantsary fototra
Tsy misy rindrambaiko natokana ho an'ny windows
Rindrambaiko fanovana horonantsary malaza iray hafa ampiasaina amin'ny fanovana horonan-tsary Professional. Na dia ho an'ny fampiasana Professional aza dia manana endrika tsotra sy haingana izy io. Na mpampiasa vaovao na matihanina taloha ity fampiharana ity dia manome endrika sy kalitao ho an'ny roa tonta. Ny rindrambaiko manaporofo ny ankamaroan'ny fitaovana dia mitaky fanovana amin'ny toerana iray, izay tsy dia ny lozisialy malaza hafa.
Ny fampidirana ny fanitsiana loko, ny effets visuels ary ny sary mihetsika ao anaty rindrambaiko iray dia manakana ny fihenan'ny kalitaon'ny horonan-tsary. Ireo fitaovana ao amin'ity rindrambaiko ity dia ampiasaina amin'ny fanovana amin'ny sarimihetsika. Ireo fitaovana ireo dia ampiasain'ny mpanakanto matihanina, mpamoaka lahatsoratra ary mpanakanto VFX.
Ao amin'ny kinova farany, mahazo Wide Gamut HDR, totozy ary fanovana miorina amin'ny fitendry ianao. Miampy motera feo mandeha tsara afaka manohana audio 2000 amin'ny rafitra iray. Izy io dia manana tetezamita marobe, vokany amin'ny vidéo ary lohateny, s, sns. Ity safidy Final Cut Pro ity dia manana endrika mahavariana ary azo alaina ho andiany maimaimpoana sy andoavam-bola avy amin'izy roa ireo.
Fampivoarana maimaim-poana misy fampiasa ilaina ilaina
Fitaovana sy fiasa fanampiny
Fanavaozana tsy tapaka
DaVinci Resolve Studio 17 amin'ny$ 25,900
Ity safidy Final Cut Pro ity dia safidy mety satria manarona ny fatiantoka amin'ny Final Cut Pro. Voalohany, rindrambaiko fanovana horonantsary novolavolaina tamin'ny taona 2004 ho an'ny Windows ity izay mampifanaraka azy amin'ny fitaovana ilain'ny filàna. Faharoa, ity rindrambaiko ity dia rindrambaiko fanovana horonantsary loharano misokatra izay midika fa malalaka ny misintona sy mampiasa azy.
Ity rindrambaiko ity dia fitaovana fanovana horonantsary miampita sehatra. Izy io dia manohana karazana fanohanana, haino aman-jery, horonantsary ary codec isan-karazany. Ny rindrambaiko dia tsy mitaky fanafarana ka mamela ny fanovana zanatany miaraka amina fandaharana marobe, vahaolana ary taham-bidy.
Mamela ny fakana sary, webcam, ary feo ary manohana vahaolana 4k farafaharatsiny. Izy io dia manana interface interface tsotra, voalamina, ary sariaka ho an'ny mpampiasa. Mahazo fanavaozana tsy tapaka. Izy io dia misy ny tetezamita, ny effets vidéo ary ny fanovana am-peo voalohany. Ny maha-rindrambaiko loharano misokatra dia maimaim-poana tanteraka izany ka mety ho an'ny vao manomboka. Na ny Professional dia mampiasa azy io mampiasa ny fahaizany mandroso mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ity rindrambaiko ity ary tsy diso fanantenana.
Open loharano ary maimaim-poana ampiasaina
Manohana endrika maro
Namboarina ho an'ny varavarankely ity dia safidy iray hafa ankafizin'ny safidy Final Cut Pro. Tamin'ny 2005 vao noforonina ary be mpampiasa nanomboka tamin'izay. Ny rindrambaiko dia manome fanitsiana kalitao amin'ny horonan-tsarinao. Ny rindrambaiko dia manohana ny ankamaroan'ny endrika horonan-tsary ary fanovana, fanafarana, fanondranana ao amin'izy ireo. Izy io koa dia ahafahana manova ny 3D.Raha hametraka azy io amin'ny mifanohitra amin'ny Final Cut Pro hafa sy ny rindrambaiko mihitsy dia manana fitaovana marobe izy io.
Izy io dia manana sivana NEWBlue Video, effets vidéo ProDAD, ary plug-in audio VST ho fanatsarana ny feo. Miaraka amin'ny fanodinana horonantsary 4k miaraka, ny fanitsiana ny loko sy ireo sivana ireo no mahazo ny tsara indrindra avy amin'ilay rindrambaiko. Ny rindrambaiko dia manana programa Mync nohatsaraina izay mandehandeha mandrindra, mizara clip ary rakitra fisie.
Amin'ny maha-safidy Final Cut Pro dia manohana ny High Dynamic Range izy io ao anaty horonan-tsary ataon'ny mpampiasa ho tsotra sy mahomby. EDIUS dia mitaky fampiasam-bola indray mandeha amin'ny fampiasana mandritra ny androm-piainany. Vantany vao nividy ianao dia mahazo fanavaozana maimaimpoana sy tsy tapaka ary mahazo fahazoan-dàlana maharitra rehefa mividy ary afaka mampiasa azy mandritra ny androm-piainana. Afaka mahazo kinova andrana maimaimpoana mandritra ny 30 andro ianao hahazoanao traikefa amin'ilay rindrambaiko ary manapa-kevitra samirery ianao.
Fampiasam-bola indray mandeha.
Fahazoan-dàlana mandritra ny androm-piainana
Misy dikanteny fitsapana 30-Andro
Ity dia rindrambaiko fanovana horonantsary malaza iray hafa. Ity rindrambaiko fanovana horonantsary mahery ity dia manome anao fitaovana marobe hamoronana horonan-tsary mahatalanjona. Izy io dia manana famolavolana intuitive ahafahan'ny mpampiasa mivezivezy amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mora foana. Izy io dia fitaovana tsara ho an'ny vao manomboka amin'ny fanovana horonantsary miaraka amin'ny interface interface-friendly.
Azonao atao ny manitsy horonan-tsary avo lenta hatramin'ny vahaolana 4k. Izy io dia manohana endrika horonantsary marobe toa ny MP4, AVI, FLV, MKV, sns, miaraka amina endrika audio toa ny MP3, WAV, M4A, sns. Amin'ny sary dia manohana endrika be dia be koa izy io. Izy io dia manana endri-javatra manan-danja toy ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha, fanapahana horonan-tsary, fisarahana, fihodinana, fampiraisana ary famokarana, fivadihana, sary an-tsary, ary ny fanarahan-dia.
Ity safidy Final Cut Pro ity dia ahafahana mizara horonantsary voadika mora. Ny fampiharana mamela ny upload amin'ny haino aman-jery sosialy, mandoro ny DVD, ary mifanentana amin'ny iOS sy Android. Azo jerena maimaimpoana amin'ny rindrambaiko ity rindrambaiko ity. Azonao atao ny misafidy ilay kinova aloa mba hahazoana endri-javatra fanampiny toy ny fanavaozana maimaimpoana, tsy misy mari-drano misy endri-javatra fanampiny.
Misy kinova maimaim-poana.
Fitaovana fototra sy manan-danja azo alaina miaraka amin'ny kinova maimaimpoana.
Betsaka ny endrika fisie no tohana.
Tsy atolotra ho an'ny matihanina.
Tsy mamela fanovana marobe indray mandeha.
Fandoavam-bola aloa amin'ny $ 7.99 / volana
Ity safidy Final Cut Pro ity dia feno zavatra marobe ampiasain'ny mpanakanto horonantsary amin'ny toerana iray. Izy io dia rindrambaiko iray ampifanarahana amin'ny fitaovana ampongarina sy 3D miaraka amina fanovana horonantsary. Ny rindrambaiko dia manana fitaovam-pandefasana sary mivelatra malalaka. Ity rindrambaiko ity dia mampiasa ny sasany amin'ireo haitao malaza indrindra eto an-tany toa ny fitaovana ampitrandrahana BorisFX's Pro.
Ny Software dia manana fanangonana fitaovana fanovana horonantsary fototra toy ny kopia, fanapahana ary ny silaka, sns. Miaraka amin'ireo fitaovana fototra dia manana fanangonana manokana tsy manam-paharoa, fitaovana fampitaovana tsara indrindra ary fitaovana enti-mihetsika. Ny endri-javatra izay mahatonga azy io ho safidy Final Cut Pro tsara indrindra dia ny manohana horonantsary misy vahaolana 8k. Ary koa ny hafaingam-pandehanany amin'ny fanondranana haingana sy ny loko 32-bit mitsingevana.
Izy io dia mamonjy Processing haingana amin'ny alàlan'ny rafitra haingam-pandeha GPU. Nanome ny fitaovana ilaina toy ny intel GPU ny rindrambaiko rehefa ampiasaina dia ho haingana sy malama. Izy io dia mahazaka endrika haino aman-jery mihoatra ny antonony ary mety indrindra amin'ny maodely VFX sy 3D miaraka amina endri-tsoratra mahery vaika. Izy io koa dia manana stabilizer horonantsary sy lakile chrome hanatsara azy tsara kokoa noho ny efa nisy.
Fitaovana sy fitaovana tsara kalitao tsara indrindra
Rindrambaiko VFX tsara koa
Ny tsara indrindra ho an'ny fampiasana Professional
Fitaovana mahery vaika no ilaina
Demo maimaim-poana miaraka amin'ny endri-javatra voafetra
Vidio indray mandeha monja ny rindrambaiko amin'ny $ 209.40
Ity rindrambaiko Alternative an'ny Final Cut Pro ity dia manome fanitsiana mifototra amin'ny fandaharam-potoana amin'ny alàlan'ny fitaovana. Ny fanitsiana mifototra amin'ny fizotry ny fotoana dia mamela ny tonga lafatra amin'ny antsipiriany tsara indrindra isaky ny varavarankely. Mamela ny famoronana mifototra amin'ny node hamela anao hanova mora foana nefa tsy hivoaka ny fizotry ny fizotry ny fotoana.
Azonao atao ny manafatra sy mamorona geometry sy lahatsoratra 3D, manampy lohateny 3D amin'ny horonan-tsarinao amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity. Ny fanetezana mavitrika dia manome anao ny fifehezana ny fotoana sy ny hafainganana. Ny rindrambaiko dia manana fanohanana endrika haino aman-jery antonony. Ity safidy Final Cut Pro ity dia manana demerit izay tsy ho an'ny Mac sy Linux irery ihany.
Manana rindrambaiko antonony ny rindrambaiko ary mandeha tsara amin'ny RAM 4GB sy audio Intel core. Ity rindrambaiko ity dia miaraka amin'ny effets vidéo marobe ampiasaina sy fitaovana fanatsarana horonan-tsary. Ny kinova fitsapana maimaimpoana dia misy miaraka amin'ny kinova aloa. Ny tsara indrindra dia ampiasaina amin'ny fampiasana matihanina fa tsy ho an'ny vao manomboka satria sarotra ny fitaovana fanovana.
Endri-javatra avo lenta
Fanovana amin'ny antsipiriany
Mety ho an'ny matihanina
Tsy misy amin'ny windows
Ho an'ny Mac sy Linux ihany
Fifanarahana mpampiasa sarotra
Dikan-teny fitsarana maimaim-poana
Fampidinana kinova feno amin'ny $ 1,620
Ity dia rindrambaiko fanovana horonantsary open source ato amin'ity lisitra ity. Izy io dia manana fiasa hampiasaina ho Final Cut Pro. Azo alaina ao amin'ny Mac, Linux, ary ny windows. Tonian-dahatsary miampita sehatra io. Mora ampiasaina ny rindrambaiko ary hianarin'ny olona haingana izy satria manana interface-tsotra ny mpampiasa.
Azonao atao ny manatanteraka ny fanovana horonantsary fototra rehetra amin'ity rindrambaiko ity toa ny manapaka, manapaka ary manapaka. Miaraka amin'ny fototra, azonao atao ny mamelona zavatra izay mitondra fiainana ny horonan-tsary. Ny rindrambaiko dia mamela layering marobe ho an'ny mari-drano, horonan-tsary, dian-peo sns ... Azonao atao ny mametaka ny fanitsiana loko sy manampy ny vokar-tsarimihetsika rehefa mampiasa an'ity rindrambaiko ity.
Azonao atao ny maka sary an-tsaina ny audios ho toy ny endrika onja ary manampy azy ireo amin'ny horonan-tsarinao aza. Miaraka amin'ny effets azonao ampiana lohateny, omeo anaram-boninahitra 3D misy vokany. Izy io dia manana interface mora ampiasaina ary mamela ny manampy horonan-tsary hovaina amin'ny drag sy drop. Azonao atao ny mifehy ny fotoana, manao ny hafainganam-pandeha haingana na miadana, mifanakalo amin'ny alàlan'ny interface mahomby.
Open loharano ary maimaim-poana
Misy ny fiasa fototra rehetra
Endri-javatra toy ny an'ny mpanova horonantsary premium.
Tsy misy endri-javatra fanampiny
Ny farany ao amin'ny lisitry ny safidy Final Cut Pro, ity rindrambaiko ity dia ampiasaina be dia be ho an'ny Proposes Professional. Nampiasaina tamina sarimihetsika marobe toa ny Wolf of wall street, Pulp Fiction, lahatenin'i King, sns. Ny rindrambaiko ho an'ny 2020 dia tonga amina fonosana misy ny zavatra rehetra mety ilainy hamoronana, manova horonantsary raha misy tanjona.
Izy io dia manana endrika tsotra tonga lafatra nandritra ny taona maro ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa sy ny fanatsarana azy. Io dia mamela ny fanitsiana sy fanalefahana ary fanovana fandaharam-potoana amin'ny horonantsary ho an'ny horonan-tsary 4k. Azonao atao ny manondrana mivantana amin'ny youtube na Vimeo nefa tsy misy kalitao momba ny PrPromising amin'ny vahaolana 4k.
Izy io dia manohana endrika haino aman-jery maro an'isa ary mamela ny 32bit GPU mazava tsara. Rehefa misintona ianao dia mahazo fahazoan-dàlana maimaimpoana 7 andro hampiasa azy io ho toy ny kinova andrana. Raha hitanao fa mifanentana amin'ny Final Cut Pro, azonao atao koa ny mividy miovaova vaovao miaraka amina vanim-potoana isan-karazany. Raha te hanatsara ny Pro dia mila misoratra anarana fotsiny ianao ary hahazo fidirana amin'ireo endri-javatra ampiasaina hanamboarana azy, manova sarimihetsika.
Malaza sy mora ampiasaina
Endri-javatra bebe kokoa
Misy fitsarana 7 andro maimaim-poana
Tsy misy Version Maimaimpoana
Tsy atolotra ho an'ny vao manomboka
$ 24,99 / volana
Final Cut Pro dia tsy isalasalana fa ny rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra, izany no ilain'ny mpampiasa varavarankely fanoloana an'ity rindrambaiko ity. Saingy manana ny anjarany amin'ny demerits izy ary tsy misy zavatra tena tsara indrindra tonga maimaimpoana, raha toa ka Final Cut Pro, mora vidy!Ka ireo safidy Final Cut Pro farany ireo no mora vidy, amin'ny tranga sasany aza maimaim-poana miaraka amin'ny endri-javatra sy fitaovana tsara indrindra. Tsy ilaina ny mividy Mac raha hanao fanovana horonantsary Professional na avo lenta. Ny hany ilainao dia iray amin'ireo rindrambaiko izay zakanao sy fahaizana mazava ho azy.
Raha jerena ny volavolan'ny mpampiasa azy ireo dia mety ho azo atao mihitsy aza fa tsy mila fahaizana prerequisite ianao. Manome ny fahaiza-mamorona anao ity rindrambaiko ity nefa tsy manahy momba ny kalitao na ny vola. Manomboha ary mety andramo daholo aza! (farafaharatsiny ireo afaka)
Q. Misy dikan-Windows ve ny Final Cut Pro?
Taona.Amin'izao fotoana izao, tsia. Fa raha ny fangatahana sy ny lazan'ny rindrambaiko iray dia mety hivoaka amin'ny ho avy. Ankoatr'izay dia misy safidy maro hafa noho ireo penina voatanisa etsy ambany izay manome valiny kalitao mitovy. Azonao atao ny manandrana rindrambaiko fanovana windows malaza tahaka ny Adobe na Corel mba hahazoana traikefa Final Cut Pro.
Q. Misy dikan-teny maimaim-poana amin'ny Final Cut Pro?
Taona.Tsy misy kinova maimaim-poana amin'ny Final Cut Pro fa azonao ampiasaina maimaim-poana mandritra ny 90 andro ho toy ny kinova fitsapana. Azonao atao ny mahazo ny traikefa feno sy ny hevitra marina momba ilay rindrambaiko alohan'ny hanapahanao hevitra ny fividianana azy. Ny fitsapana 90 andro dia mihoatra noho izay azonao atao ny manapa-kevitra raha toa ka mendrika izany sa efa anananao izay rehetra azonao atao amin'ny kinova maimaim-poana.
Q. Ahoana no fomba hahazoako Final Cut Pro ho an'ny windows maimaimpoana?
Taona.Ny valiny tsotra sy feno amin'ity fanontaniana ity dia, tsy azonao atao izany. Nefa tsy tokony ho diso fanantenana ianao satria tsy azonao maimaim-poana akory amin'ny Mac. Saingy azonao atao ny mahazo rindrambaiko fanovana horonantsary maimaimpoana izay afaka manome ny vokatra tsara indrindra azo hamoronana ny fahaiza-mamorona anao ary afaka manangona ny biraonao miaraka amin'ny fitaovany. Iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra maimaim-poana, safidy Final Cut Pro ho an'ny varavarankely dia ny Openshot.
Safidy Garageband tsara indrindra
Fifanarahana amin'ny zoma mainty Nintendo Switch 2020 - Tolotra mahatalanjona
manaova fampidinana maimaim-poana ho anao
mpilalao mozika an-tserasera maimaim-poana tsy voasakana
mijery sarimihetsika piraty amin'ny Internet maimaim-poana
youtube ho mp3 ary misintona
serial tv tv streaming maimaim-poana
aiza no hijerena sarimihetsika feno amin'ny Internet maimaim-poana
kaonty netflix maimaim-poana tsy misy carte de crédit